Rosia – Etazonia .: Nandresy i Obama, Nandray Fitenenana i Medvedev · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jona 2018 17:05 GMT
Ora vitsy taorian'ny fandresen'i Obama tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena Amerikana, nanao ny lahateniny voalohany (amin'ny teny Anglisy) ny filoha Rosiana, Dmitry Medvedev, teo anoloan'ny Filankevitry ny Federasiona Rosiana. Nahasarika ny sain'ny firenena sy ny an'ny Tandrefana ny fanambaràny.
Naneho ny heviny (amin'ny teny rosiana) ilay mpampiasa LiveJournal oleg-kozyrev tamin'ny tolokevitr'i Medvedev hanitatra ny fe-potoam-piasan'ny filoha ao Rosia ho tonga efatra ka hatramin'ny enina taona :
Tao anaty kabariny, tsy niarahaba an'i Obama noho ny fandreseny i Medvedev, na nanonona ny anaran'ilay filoha voafidy akory aza. Fanampin'izay, nandefa hafatra manebaka ihany koa izy, nampanantena, ankoatry ny zavatra hafa, ny hanaparitaka ny rafitra momba ny balafomanga tsy mahataka-davitra “Iskander” (amin'ny teny Anglisy) ao amin'ny faritr'i Kaliningrad, any amin'ny sisintany andrefan'i Rosia, mba « hanoherana amin'ny fomba mahomby ireo andrana maharitra sy betsaka ataon'ny governemanta Amerikana amin'izao fotoana izao mba hametrahana singa vaovao amin'ny rafitra fiarovantena amin'ny balafomanga ao Eoropa.»
Ilay mpampiasa LiveJournal viking-nord (amin'ny teny rosiana) :
telemont (amin'ny teny Rosiana) :
Toy izany mihitsy ny fomba nampisaina tamin'ilay [ loza mahatsiravina tao Beslan] : rehefa hita fa nanomboka nametraka fanontaniana mahamay sy mahasorena tamin'ny fitondrana ny vahoaka, nanapa-kevitra ny hanafoana ny fifidianana ireo governoram-paritra i Poutine. Raha tsorina, ny fandraisana andraikitra iray [ankoatra ilay fanontaniana], saingy tena nety tanteraka: nirohotra avy hatrany hifanakalo hevitra ny olona, nifidy ary nanendry, nanadino hoe nisy ireo ankizy maty
Tao aminà lahatsoratra iray hafa, telemont no nanamarika (amin'ny teny Rosiana) fa:
( Hita ato ny tsonganà rohy maromaro mankany amin'ireo fanehoankevitra avy amin'ireo blaogera miteny anglisy momba ny kabarin'i Medvedev )